Shikhar Post » के-के पाउँछन् नेपाल आइडलले ?
के-के पाउँछन् नेपाल आइडलले ?
काठमाडौं, असोज ६ – शुक्रबार नेपाली संगीत पारखाीहरुले प्रथम नेपाल आइडल पाउने भएका छन् । लोकप्रिय रियालिटी टेलिभिजन शो नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनालेमा पुगेका तीन प्रतिस्पर्धीमध्येबाट शुक्रबार एक जना नेपाल आइडल बन्नेछन् ।
प्रथम नेपाल आइडलले दर्शकको मन त जित्ने नै छन्, त्यसका साथै प्रथम नेपाल आइडलले २० लाख रुपैयाँ नगद, महिन्द्राको केयुभी १०० र १५ लाख बराबरको भिडियो एल्बम र कन्ट्रयाक्ट पाउनेछन् ।
भोटका आधारमा नेपाल आइडलमा दोस्रो हुनेले १५ लाख रुपैयाँ नगद र तेस्रो हुनेले १० लाख रुपैयाँ नगद पाउनेछन् ।
नेपाल आइडलको फाइनलमा पुगेका सबै कलाकार अब्बल छन् । तर पनि प्रतियोगिता भएकाले एक जना विजेता घोषित हुनेछन् । नेपाल आइडलमा विजेता हुनु भनेको सांगीतिक यात्राको सर्वोच्च शिखर पुग्नु होइन । प्रतियोगिताबाट बाहिर निस्केर प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने मात्रै नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुनेछन् ।